IMacOS Big Sur 11.3 RC, uphononongo lomoya, kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
Kule veki kuyeyona nto iphambili kubasebenzisi abaninzi be-Apple nakwinkampani yeCupertino uqobo. Ukufika kwe-iMac entsha kuyilo olutsha, iiprosesa ze-Apple M1, isikrini esingcono kwaye ekugqibeleni iMac ehlaziyiweyo ngokupheleleyo yayiyeyona nto iphambili kumsitho ngo-Epreli 20. Kunye nale iMac intsha yayizii-AirTags ezintsha, i-Apple TV 4K kunye ne-iPhone 12 emfusa, izixhobo ezimbalwa kunye neemveliso ngokuqinisekileyo ezinokuthandwa ngabasebenzisi baka-Apple.
Kodwa ukongeza kwintetho yeApple sikhe ndaba neendaba ezibalulekileyo kwihlabathi leApple. Yiyo loo nto namhlanje ngeCawe siza kubona ezona ndaba zibalaseleyo ndivela eMac. Siqala nge Ukukhutshwa kwenguqulelo yeMacOS Bic Sur 11.3 RC. Oku kuthetha ukuba Kwiveki ezayo siya kuba nohlobo lokugqibela lwenkqubo yokusebenza kweMac.
Ukongeza kumceli mngeni woMhla woMhlaba, iApple ikwaqaqambile kwiwebhusayithi yayo ukuzibophelela kwabo kwindalo esingqongileyo. I-Apple iyaqhubeka nokulwa ukuphelisa ifuthe kwindalo esingqongileyo kangangoko ebandakanya ukuveliswa kwezixhobo, ukufunyanwa kweziko ledatha, kwaye ifuna abathengisi ukuba bazibandakanye nokuzibophelela kwayo.
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, ezinye ze-YouTuber eyaziwayo kwindawo zikhulule zazo uphononongo olubonisa ii-AirTags, imisebenzi yazo kunye ne-iPhone 12 emfusa. Okwangoku, abanye bethu abafayo kuya kufuneka balinde ukufika, uninzi lwethu luya kubamkela nge-30 ka-Epreli, Kwaye ubacelile?
Kulabo basebenzisi abafuna ukuthenga iMac ngeglasi eyenziwe nge-nano bayayazi loo nto I-Apple yenze ukuncitshiswa phantse kwe- $ 300 kubo. Ndifikile iiyure emva kokubonisa iMac entsha kwaye kule meko Ezi ziimodeli ezindala ezingama-27-intshi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IMacOS Big Sur 11.3 RC, uphononongo lomoya, kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac